Ogaden News Agency (ONA) – Gudiyada Faracyada Xeryaha Qaxootiga Kenya oo ka Shiray Arima Muhiim ah
Gudiyada Faracyada Xeryaha Qaxootiga Kenya oo ka Shiray Arima Muhiim ah
Posted by ONA Admin	/ October 20, 2014
Maalin nimadii Axada ahayd oo ay taariikhdu kubeegnayd 19/10/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab kadhacay shirkii gudiyada faracyada 3da xero ee kala ah Dhagaxlay, Ifo iyo Xagardheere. Kulankan ayaa ahaa mid caadi ah oo ay isugu yimaadaan faracyadu ayaa ah mid door lixaad leh kaqaata hor umarka howlaha halganka waxaana kalkan marti galiyay faraca Midnimo.
Shirkan oo mudo aad udheer socday ayaa furmay abaare 9:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaana lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka. Ka dib wuxuu shir gudoomiyaha faraca Midnimo qoraal ku sameeyay qodobada ama ajandayaasha ay qolo kastaba wadatay ayna jeceshahay in lagadoodo waxaana la kor istaagay qodobka warbixinta oo muhiimad gaar ah lahaa maadaama oo ay warbixintu
ka kala imaanaysay faracyo kala duwan iyo deegaano kala duwan waxaana si waafi ah la’isu waydaarsaday wixii warbixin ahaa iyo su’aalo badan oo ku hoos jiray.
Sidoo kale waxaa lafalan qeeyay qodobadii shirkii kan kahoreeyay lagu balamay wixii kafulay iyo waxaan fulun waxayna gudigu isla aqbaleen in ay fuleen 90% wixii lagu balamay 10ka hadhayna ladhamayn doono xiliga ku haboon. Sidoo kale waxaa miiska lasoo saaray sidii loosii labanlaabi lahaa wada shaqaynta faracyada oo hadaba ah mid aad usaraysa waxaana hoosta laga xariiqay in lasameeyo hurumar dhankasta ah si lootaaba galiyo higsiga shacabka dulman ee ree Ogadenia.
Waxaa sidoo kale laga hadlay xaaladaha guud iyo kuwa gaar ee dhinaca amniga ah iyadoo lacarab baabay amniga guud in aan laqabno qoxootiga xeryaha kunool dowlada kenyana looga danbeeyo wixii xaaladaha amniga ah iyadoo la islaqaatay sidii kooxaha ay Itoobiya soo dirayso ee afduubka iyo dilka kawada G/W/Bari Kenya sidii looga hortagi lahaa iyadoo la kaashanayo dowlada Kenya gaar ahaa Police ka.
Kulankan oo mudo dheersocday qodobadiisuna ay aad ubadnaayeen ayaa soo gaba gaboobay 4:00 galabnimo wuxuuna kudhamaaday guul iyo sidoo loogu talagalay.
Dhanka kale waxaa kulankoodii caadiga ahaa isugu yimid ururka OYSU fariciisa Ifo waxaana kulankan lagaga hadlay arimo dhowr ah oo ay kamid yihiin horumarinta howlaha ururka iyo guud ahaa howlaha halkanka ee kasocda deegaanka ay kadhisan yihiin, tiro koobka rasmiga ah ee ururka OYSU fariciisa Muftaaxulxoriyo, kor uqaadida xidhiidhka Faracyada OYSU ee kadhisan Deegaanada Hoosyimaada Dhadhaab iyo gyyd ahaan wadanka.
Waxaana goobta shirka warbixin waafi ah kasoo jeediyay xoghayaha oysu Ifo mudane cabdi carab sidoo kale waxaa kalmado muhiim ah kajeediyay xoghayaha oysu Dhagaxlay mudane Muuse Cismaan oo shirka marti ku ahaa wuxuuna kulanku kusoo dhamaaday guul iyo farxad.